Gunnersaurus လေး အမျးမရိတျကို ပွနျလာခဲ့ပွီဖွဈပမေယျ့ အရုပျထဲကသူက ဘယျသူလဲ ... ? - Arsenal Myanmar News
Gunnersaurus လေး အမျးမရိတျကို ပွနျလာခဲ့ပွီဖွဈပမေယျ့ အရုပျထဲကသူက ဘယျသူလဲ … ?
အာဆငျနယျအသငျးဟာ အသငျးရဲ့ လာဘျကောငျအရုပျလေး Gunnersaurus အမျးမရိတျမွကေို ပွနျလာခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျကပဲ တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။
ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနတှေကွေောငျ့ အာဆငျနယျအသငျး ဝနျထမျးတှေ လြှော့ခခြဲ့တဲ့အထဲမှာ Gunnersaurus အဖွဈ ကာလရှညျကိုယျစားပွုခဲ့သူ ဂယျြရီကိုငျးကလညျး ပါဝငျသှားခဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ ဝဖေနျမှုတှလေညျး မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးကတော့ ဒါဟာ ခတ်ေတခဏသာ အနားပေးခဲ့တာဖွဈပွီး ကှငျးအတှငျး ပရိသတျတှေ ပွနျလညျဝငျရောကျလာခြိနျကရြငျ Gunnersaurus လညျး ပွနျလာမှာဖွဈတယျလို့ အတညျပွုထားခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာလညျး Gunnersaurus ကို အာဆငျနယျအသငျး ပွနျလညျချေါယူခဲ့ပွီဖွဈပမေယျ့ ဂယျြရီကိုငျးတယောကျ ပွနျလာခဲ့ပွီလားဆိုတာကတော့ ရရေရောရာ မသိရသေးတဲ့ အခွအေနပေါ။ ကိုငျးကို အာဆငျနယျအသငျးက Gunnersaurus အဖွဈ ပွနျလညျတာဝနျထမျးဆောငျဖို့ ကမျးလှမျးမှုပွုထားခဲ့ပမေယျ့လညျး ကာယကံရှငျကတော့ အခုထကျထိ လကျမခံသေးဘူးလို့ Telegraph သတငျးဌာနက ဖျောပွထားပါတဘျ။
” ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ပွောလိုတာကတော့ Gunnersaurus ဟာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတျအပိုငျးတခု ဖွဈပါတဘျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကမ်ဘာတဝနျးက ပရိသတျတှကွေား ထငျရှားကြျောကွားတဲ့ ပုံရိပျတခုပါပဲ။ ”
” ဂနျးနားတှဟော ဒီလာဘျကောငျအရုပျလေးကို အဝေးမှာ ထားလိုခွငျး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ဗိုငျးရပျဈကပျဆိုးကွား အခွအေနတှေကွေောငျ့ မတတျသာခဲ့ဘဲ ဆုံးဖွတျခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ” လို့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဦးက ဆိုထားပါတယျ။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အသင်းရဲ့ လာဘ်ကောင်အရုပ်လေး Gunnersaurus အမ်းမရိတ်မြေကို ပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ကပဲ တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်း ဝန်ထမ်းတွေ လျှော့ချခဲ့တဲ့အထဲမှာ Gunnersaurus အဖြစ် ကာလရှည်ကိုယ်စားပြုခဲ့သူ ဂျယ်ရီကိုင်းကလည်း ပါဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ ဒါဟာ ခေတ္တခဏသာ အနားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွင်းအတွင်း ပရိသတ်တွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာချိန်ကျရင် Gunnersaurus လည်း ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာလည်း Gunnersaurus ကို အာဆင်နယ်အသင်း ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ဂျယ်ရီကိုင်းတယောက် ပြန်လာခဲ့ပြီလားဆိုတာကတော့ ရေရေရာရာ မသိရသေးတဲ့ အခြေအနေပါ။ ကိုင်းကို အာဆင်နယ်အသင်းက Gunnersaurus အဖြစ် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုပြုထားခဲ့ပေမယ့်လည်း ကာယကံရှင်ကတော့ အခုထက်ထိ လက်မခံသေးဘူးလို့ Telegraph သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတဘ်။
” ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြောလိုတာကတော့ Gunnersaurus ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ပါတဘ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းက ပရိသတ်တွေကြား ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ပုံရိပ်တခုပါပဲ။ ”
” ဂန်းနားတွေဟာ ဒီလာဘ်ကောင်အရုပ်လေးကို အဝေးမှာ ထားလိုခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဆိုးကြား အခြေအနေတွေကြောင့် မတတ်သာခဲ့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” လို့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးက ဆိုထားပါတယ်။
By AM Editor| 2020-11-17T03:50:53+00:00	November 17th, 2020|Team News|Comments Off on Gunnersaurus လေး အမျးမရိတျကို ပွနျလာခဲ့ပွီဖွဈပမေယျ့ အရုပျထဲကသူက ဘယျသူလဲ … ?
ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး လူစာရငျး အဆငျ့ရပျတညျမှုရဲ့ (၁၃) နရောမှာ ရှိနတေဲ့ အာဆငျနယျ